United States – NU MYAT AROUND THE WORLD
May 25, 2017 April 20, 2021 Posted in america, Travel, UncategorizedTagged hollywood, Travel, United StatesLeaveacomment
July 18, 2016 April 21, 2021 Posted in Travel, Uncategorized, United StatesTagged New York, Nu Myat around the World, Travel, United StatesLeaveacomment
အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ 9/11 ဝမ်းနည်းခြင်း အထိမ်းအမှတ်နေရာသို့
9/11 memorial New York, USA
September 3, 2015 April 21, 2021 Posted in Adventure, Natural Wonder, The Grand Canyon, Travel, United StatesTagged adventure, Helicopter, Natural wonder, Nature, Nu Myat around the World, The Grand Canyon, Travel, United States, West RimLeaveacomment
ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ် ဂရန်းကင်ညွန် ချောက်ကမ်းပါးကြီး
Nu Myat at the Grand Canyon
ချောက်ကမ်းပါးပျက်ကြီးများ၊ နက်ရှိုင်းသောချောက်ကြီးများနှင့် အံ့သြဖွယ်ရာ လှပလှသော ဂရင်းကင်ညွန် (Grand Canyon) သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင် စုအနောက်ဘက်ရှိ အယ်ရီဇိုးနား (Arizona)ပြည်နယ်တွင် တည်ရှိလျက်ရှိပါသည်။ ထူးခြားခမ်းနားလှသော သဘာဝအလှတရားရှုခင်းများကြောင့် ကမ္ဘာ့သဘာဝအံ့ဖွယ် ၇ ခုထဲ၌ တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်နေသည့်ထို Grand Canyon သို့ ကျွန်မသည် 2014 ခုနှစ် ဇွန်လလယ်လောက်က ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ Woman in Public Services အဖွဲ့အစည်းမှ ဖိတ်ကြားသည့် နှစ်ပတ်ကြာသင်တန်းကို Massachusetts ပြည်နယ်ရှိ ကောလိပ်များ၌ တက်ရောက်ပြီးနောက် အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ ထင်ရှားကျော်ကြားသည့် နေရာများသို့ မိမိအစီအစဉ်ဖြင့်သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ရာ Grand Canyon သည် ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ်ဒေသဖြစ်၍ မဖြစ်မနေ သွားရောက်လေ့လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Grand Canyon သည် အရှည်အားဖြင့် ၂၇၇ မိုင်ရှည်ကာ အကျယ်အားဖြင့် ၁၈ မိုင်ထိရှိပြီး အနက်မှာမူ တစ်မိုင်ကျော်ရှိသည်။ Grand Canyonကို ဖြတ်သန်း စီးဆင်းနေသည့် ကော်လိုရာဒို(Colorado)မြစ်နှင့် မြစ်လက်တက်များ၏ တိုက် စားမှုကြောင့် တစ်လွှာပြီးတစ်လွှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရာ နှစ်ပေါင်း သန်း ၂၀၀၀ နီးပါးအကြာ သက်တမ်းရှိ ကမ္ဘာ့ဘူမိဗေဒသမိုင်းကို ဖော်ပြနေသည့် ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာ ရှုခင်း များဖြစ်ပေါ်နေခြင်းဖြစ်သည်။
ထို Grand Canyon ချောက်ကြီးအတွင်းနှင့် ကျောက်ဂူများ၌ မူလအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများ နှစ်ပေါင်းထောင်ချီနေထိုင်ခဲ့ ဖူး၍ ၁၉၁၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလမှစတင်ကာ အမျိုးသားဥယျာဉ်အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ ရာ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များစွာ လာရောက်လေ့လာလျက်ရှိပြီး တစ်နှစ်လျှင် ပျမ်းမျှ ၅ သန်းခန့် လာရောက်သည်ဟု သိရသည်။
ခရီးသည်များအနေဖြင့် Grand Canyon ကို အရှေ့၊ အနောက်၊ တောင်၊ မြောက်ကမ်းပါးလေးခုမှ လေ့ လာနိုင်ရန်စီစဉ်ထားသော်လည်း သွားလာရခက်ခဲသည့် အရှေ့နှင့်မြောက်ကမ်းပါး များထက် ရှုခင်းပိုလှပြီး သွားရလွယ်ကူသည့် တောင်နှင့်အနောက်ကမ်းပါးများသို့ ပိုမိုသွားရောက်လေ့ရှိကြပါသည်။ ကျွန်မဆိုလျှင်လည်း လက်စ်ဗေးဂက်စ်(Las Vegas)မြို့မှတစ်ဆင့် သွားရောက်ခြင်းဖြစ်ရာ မြို့နှင့်အနီးဆုံးဖြစ်၍ ၃ နာရီအကြာ ကားဖြင့်သွားရောက်ရသည့် အနောက်ကမ်းပါး (West Rim)သို့ သွားရောက်ခဲ့ပါသည်။
Skywalk Glass bridge at Eagle Point
West Rim သည် Las Vegas နှင့်နီးသကဲ့သို့ အောက်ဘက် ပေ ၄၀၀၀ နီးပါးနက်ရှိုင်းသည့် ချောက်ကို တိုးလျှိုပေါက်မြင်နိုင်ရန် ကြမ်းခင်းကို မှန်ဖြင့်ပြု လုပ်ထားသည့် Sky Walk မှန်တံတားလည်းရှိခြင်းကြောင့် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များ အသွားဆုံးကမ်းပါး ဖြစ်နေပါသည်။ ထိုမှန်တံတားတည်ရှိရာ Eagle Point သာမက နေဝင်ချိန်ကြည့်လေ့ရှိသည့် Guano Point တို့မှ တစ်မျှော်တစ် ခေါ် မြင်တွေ့ရသည့် အံ့ဖွယ်ရှုခင်းများကြောင့်လည်း ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များကြား ခေတ်စားလို့နေခြင်းဖြစ်သည်။
Look her pose. Scary! 🙂
Tourists taking photos with the natives
Canteen at the Guano Point
ခရီးသည်များအနေဖြင့် ရှုမျှော်ခင်းများကို ကြည့်ရုံ မျှမက အဆိုပါမှန်တံတားပေါ် အသည်းထိတ်ဖွယ် လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ချောက် ကမ်းပါးအပေါ်၌ ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့် ရှုမျှော်ခင်းများကြည့်ခြင်း၊ ကော်လိုရာဒိုမြစ်ထဲ စက်လှေစီးခြင်း စသည်တို့ပြု လုပ်နိုင်သလို စွန့်စားလိုသူများအနေဖြင့် ရေစီး ကြမ်းသည့် မြစ်အပိုင်း၌လှေစီးခြင်း၊ ချောက်ကမ်းပါးအတွင်းတောင်တက်ခြင်း၊ ညအိပ်ညနေ Camp ထိုးခြင်း၊ ပေ ပေါင်း ၁၄၀၀၀ ကျော် အမြင့်ရှိ ရဟတ်ယာဉ် ပေါ်မှ လေထီးဖြင့် အမြင့်ခုန်ခြင်း စသည်များကိုပါ ပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း သိရသည်။
Birdeye view of Grand Canyon from Helicopter
Nu Myat on the cruise
Cruise on Colorado River
ကျွန်မအနေဖြင့်မူ ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ်နေရာသို့ ရောက်တုန်းရောက်ခိုက် ရဟတ်ယာဉ်စီးကာ Grand Canyon များ၏ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာရှုခင်းများကို အပေါ်စီး မှ ရှုစားဖြစ်ခဲ့ပါ၏။ ရဟတ်ယာဉ်စီးခမှာ ဒေါ်လာ ၂၀၀ ကျသင့်သော်လည်း ချောက် ကမ်းပါးကြမ်းပြင်၌ပါ ဆိုက်ကပ်ကာ ကော်လိုရာဒိုမြစ်ထဲ စက်လှေစီးရသည့် ဝန်ဆောင်မှုပါ ပါရှိခြင်းဖြစ်၍ မဆိုးလှဟု ဆိုရမည်။ ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ်တစ်ခုဖြစ်သော Grand Canyon ချောက်ကြီးသို့ အမေရိကန်နိုင်ငံကို အလည်သွားသူတိုင်း မဖြစ်မနေ သွားရောက် လေ့လာသင့်ကြောင်း စာရေးသူအနေဖြင့် အကြံပြုလိုက်ချင် ပါသည်။
Receiving certificate for experiencing Hualapai culture at the souvenir center
This is me, Nu Myat